Taariikhda logo Lacoste: taariikhda Yaxaaska caanka ah oo buuxa | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 28/03/2022 13:43 | Design Graphic, Dhiirrigelinta
Astaamaha iyo alaabtu waa wax had iyo jeer la socda adduunka warshadaha moodada. Si aad u badan, in ay jiraan calaamado aan ku tilmaami karno oo kaliya calaamadahooda. Fashion ayaa masuul ka ahayd u ​​gudbinta bulshadeeda ama dadwaynaha, qiyamka ka dhigaya mid la mid ah badeecadeeda iyo habka loo iibiyo.
Qoraalkan umaanaan nimid inaan kaala hadalno suuq-geynta iyo meelaynta summada suuqa, balse, Waxaan u nimid inaan kuu sheegno sheekada caanka ah ee caanka ah ee Yaxaaska cagaaran, laga bilaabo Lacoste. Astaan, muddo sanado ah, ayaa lagu abaalmariyay mid ka mid ah noocyada ugu quruxda badan suuqa.
Kadib Waxaan sharaxnaa waxa sumaddan cajiibka ah ay tahay iyo maxay ahayd taariikhdeeda iyo bilawgeedii, shirkad ahaan iyo sumad ahaan shirkad ahaanba.
1 Lacoste: waa maxay
2 Taariikhda Lacoste
2.3 70-kii iyo 80-kii
2.4 Sanado kadib
3 Taariikhda astaanta Lacoste
3.2 Nooca sawirka
3.3 aduunka suuq geynta
Lacoste: waa maxay
Lacoste waxaa lagu qeexay sida mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee dharka Faransiiska ee suuqa. Waxaa sameeyay Faransiiska René Lacoste, waxay ahayd astaanta ugu wakiillada badan ee alaabooyinka kala duwan sida saacadaha, funaanadaha, funaanadaha polo, cadarka, kabaha, suumanka iyo xitaa boorsooyinka safarka.
Shirkadda waxaa la aasaasay 1923 lamana filayo in aasaasihiisii ​​uu ahaa ciyaaryahan tennis caan ah oo la qaaday kooxdiisii ​​Faransiiska ee Davis Cup. Lacoste, sannadihii la soo dhaafay, waxa ay u xuubsiibtay sumad ahaan waxayna isu dhigtay si isa soo taraysa xagga sare ee suuqa. Waxaan kaa tagnay qaar ka mid ah sifooyinka astaanta Lacoste oo hubaal kugu yaabin doona.
Lacoste waa mid ka mid ah noocyada waxay isticmaashaa agabka dunta sida poliurethane, maaddo dhar ah oo aad caan u ah alaabta moodada. Iyada oo la shaqaynaysa alaabtan oo kale, shirkadu waxay jeebka ku shubtaa lacag badan. Intaa waxaa dheer, alaabteeda iyo bartilmaameedka waxay la xiriiraan heer dhaqan-dhaqaale oo cadaalad ah oo sarreeya, taas oo ka dhigaysa calaamad qaali ah.
Astaanta ayaa ku daray Yaxaaska astaanta ugu weyn, sababtoo ah aasaasihii dunida waxaa looga yaqaanay Yaxaaska iyo sababtoo ah wuxuu helay alaabooyin kala duwan oo lagu sameeyay maqaarka yaxaaska.
Alaabta ugu caansan ee astaantan Waa shaadh polo ah oo dhinac ka mid ah yaxaas loo qurxiyey. Dharkaani wuxuu soo maray heerarkii ugu sarreeyay ee moodada, wuxuuna ahaa mid ka mid ah sababaha ku soo jiiday astaanta sharafta iyo heerka sare ee adduunka moodada. Shaki la'aan, sifo gaar ah oo aad u yar.
Laakiin wax kastaa ma ahayn kuwo raaxo leh iyo alaabooyinka asalka xoolaha, halkii, Lacoste, waqti ka dib, waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee ay ka go'an tahay dib u warshadaynta kabaha. Sannad kasta waxay dib u warshadeeyaan in ka badan 1 milyan oo kabo kabo ah, maadaama kabo kasta lagu sameeyay shay u oggolaanaya dib-u-warshadayn iyo wax ka beddel. Shaki kuma jiro in Lacoste uu leeyahay taariikh dheer oo astaamo ah oo ka dhigaya mid ka mid ah noocyada ugu fiican. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale la iftiimiyay in in ka badan hal milyan ay isticmaaleen ama isticmaaleen mid ka mid ah dharkooda.
Xigasho: Enrique Ortega
Taariikhda taariikhdu markay ahayd 1933kii. markii ciyaaryahankii caanka ahaa ee reer France René Lacoste, uu ku mahadsan yahay kartidiisa iyo dhiirigelintiisa, wuxuu go'aansaday inuu calaamad ka dhigo aduunka tennis-ka iyo moodada. Sababtan awgeed, wuxuu abuuray calaamad ay ku dhiirigelisay.
Alaabta ugu horeysay ee la abuuray waxay ahayd shaati caan ah oo la yiraahdo Le chemise Lacoste oo isu keenay agaasimayaal waaweyn sida André Gillier, ayaa ku guulaystay in uu naqshadeeyo iyo in la soo saaro shaadhka caanka ah ee Lacoste uu si gaar ah ugu talagalay ciyaartoyda tennis-ka iyo dadka u heellan adduunka tennis-ka. Lacoste waxa kale oo uu go'aansaday in uu wax soo saarkiisa ku maalgeliyo ciyaaraha sida golfka ama badmaaxidda. Waqtigan xaadirka ah, astaanta waxaa isticmaala ciyaartoyda tennis-ka iyo goleyaasha adduunka oo dhan.
Waqti dheeri, astaanta ayaa sii kordheysa oo ku fiday geeso kala duwan oo adduunka ah. Si aad u badan oo calaamad u ah waxay bilaabeen inay naqshadeeyaan funaanado badan oo midab leh oo cajiib ah, sidaas darteed ka fogaanshaha soo saarista iyo naqshadeynta shaati-cadeedka polo iyo funaanadaha, sababtani waxay ku kalliftay inay abuuraan ururintooda ugu horreysa ee carruurta.
Sannadkii 1952-kii, alaabteedu waxay horeba u gaadheen waddamo sida Maraykanka oo kale ah, halkaas oo calaamaduhu ay bilaabeen inay saameyn ku yeeshaan noocyada kale ee heerka sare ah. Shaki la'aan waxay ahayd mid ka mid ah saamaynta ugu quruxda badan dalka, tan iyo markii lagu dhawaaqay Ameerika inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu raaxada badan uguna muhiimsan suuqa iyo qaybta moodada.
Sannadkii 63, shirkaddu waxay u gudubtay gacmaha ina René, Bernard Lacoste. Maxaa ka qayb qaatay kobaca astaanta iyo shirkaddu way korodhay, maadaama ku dhawaad ​​600.000 oo shaadh la iibin jiray sannadkii. Shaqsi dhaafiyay wax soo saarka noocyada kale oo ka dhigay tartanka ugu weyn suuqa.
70-kii iyo 80-kii
70-meeyadii iyo 80-maadkii waxay labaduba ahaayeen sannadihii ammaanta ee warshadaha moodada. Si aad u badan in astaanta Ameerika ay noqotay tan ugu muhiimsan dalka. Inta lagu jiro sanadkan, calaamaddu waxay bilowday inay naqshadayso oo ay soo saarto badeecooyin cusub: gaagaaban ee wakhtiyada xagaaga, muraayadaha qorraxda, cadarka ka tagay ur gaar ah iyo calaamad ku leh qaybta, tennis-ka ugu horreeya iyo kabaha isboortiga, saacadaha ugu ciyaaraha fudud iyo maqaallada la xidhiidha maqaarka. Shaki la'aan muddada wax soo saarka ugu fiican ee sumadda
Sannado ayaa dhaafay, iibkuna wuu sii socday inuu kordho. Ilaa malaayiin alaab ah ayaa bilaabay in lagu iibiyo in ka badan 110 waddan. Bernard Lacoste ayaa xanuunsaday 2005tii, walaalkii kale Michel Lacoste ayaa la wareegay shirkadda. 2007 Lacoste waxay horey u lahayd suuq elektaroonig ah halkaas oo ay ku iibisay alaabteeda iyo waqti ka dib, waxay noqotay astaanta leh alaab-qeybiyaha ugu weyn ee suuqa oo dhan.
Maanta, waxaan awoodnaa inaan aragno astaanta oo aan aqoonsanno. Intaa waxaa dheer, waxaa hubaal ah inuu jiro dukaanka Lacoste ee mid ka mid ah magaalooyinkeena.
Si aad u sharaxdo sida yaxaaskaasi u soo baxay calaamadda ugu weyn ee sumadda. Waa inaan ku laabanaa tartanka Davis Cup ee Boston. Markii ciyaaryahan tennis-ka oo lagu magacaabo René Lacoste lagu dhawaaqay inuu yahay horyaal, wariye ayaa u magacaabay Yaxaaska qaab ciyaareedkiisa wacnaa.
Halkaas ayay ka soo kacday calaamadii aynu maanta naqaanay. Naanaystaan ​​ka dib, René waxay la timid fikradda abuuritaanka shirkad, nooc calaamad ah oo tilmaamaya shaqada adag ee uu ka qabtay adduunka tennis-ka. Tani waa sida ka dib markii la abuuray calaamadda bilawgeedii, yaxaaska ayaa loo yaqaan 'calligator cagaaran' 1927.
Tani waa sida halhayskii ugu horreeyay ee astaanta "hawo yar oo dhulka ah" ayaa sidoo kale la abuuray ilaa laga beddelay mid kale oo aan caadi ahayn oo hadda jira, oo loogu talagalay dhagaystayaal aad u da'yar.
Nooca qoraalka ah ee si weyn uga dhex muuqda astaanta ayaa shaki la’aan ahaa tii lagu dabaqay 2002. Astaan ​​casri ah, fudud oo casri ah oo tilmaamaysa waxa ay calaamaddu doonayso in ay la xidhiidho mar kasta. Calaamad leh hawo isboorti gaar ah iyo isla mar ahaantaana, oo leh qaab ku filan si loo abuuro calaamad halis ah oo qurux badan.
Sababtan awgeed, sans serif casri ah iyo nooca joomatari ayaa la isticmaalay. Hadda dib bay u habeeyeen oo waxay isticmaaleen qoraal aad uga fudud. Intaa waxaa dheer, dhammaan aqoonsiga astaanta ayaa la xakameeyey, taas oo macnaheedu yahay in calaamaddu ay lumisay qayb ka mid ah qiimaha iyo aqoonsiga ay sii waday tobannaankii sano ee la soo dhaafay. Shaki la'aan, waa tusaale qaali ah in dib u habeyn ama isbeddel ku yimaada naqshadeynta astaanta ay ka dhigi karto calaamad awood u leh inay lumiso mid kasta oo ka mid ah qiyamkiisa, shaki la'aan.
aduunka suuq geynta
Suuqgeynta ayaa door ka ciyaartay adduunka naqshadeynta iyo sidoo kale Lacoste oo ah sumad ahaan. Lacoste waxay leedahay qiimo aad u muhiim ah xagga dhaqaalaha marka loo hadlo sannad kasta. Intaa waxaa dheer, calaamadiisu waxay ku guulaysatay inay ka gudubto shaashadda oo leh qaar ka mid ah xayaysiisyada ugu wanaagsan iyo daaqadaha dukaamada ee magaalooyinka ugu fiican adduunka.
Shaki la'aan, Lacoste wuxuu ahaa oo noqon doonaa astaanta ugu wanaagsan ee qaybiyayaal badan. Fikradda isku dhafka fikradaha sida isboortiga ama isboortiga iyo xarrago ama xarrago sidoo kale waa mid xariif ah. Shaki la'aan, calaamad awood u leh inay sixir ku sameyso alaabteeda.
Lacoste waxaa hadda loo yaqaan astaanta xiddiga ee ciyaartoy badan iyo kuwa aan ahayn. Astaantu waxay ku guulaysatay inay kala saarto laba kooxood oo dad ah oo gebi ahaanba kala duwan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad ogaato saameynta weyn ee calaamadani ku yeelatay qaybta naqshadeynta garaafka.
Astaanta, tan iyo markii la aasaasay, waxay ogaatay sida loogu habeeyo fariinta isgaarsiineed oo leh waxa wakiil ah oo lagu saadaaliyay warbaahinta kala duwan. Astaan ​​aan u suurtagelin in aan la dareemin, aad u liidata. Waxaan runtii rajaynaynaa inaad wax badan ka baratay summadan xariifnimada leh iyo alaabteeda sida wanaagsan loo farsameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Taariikhda astaanta Lacoste
Taariikhda astaanta Netflix